Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: May 2012
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဝင်ငွေခွန် နှုန်းထားအသစ်နဲ့ ဝင်ငွေခွန် ဆောင်မယ်ဆိုရင် …
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဝင်ငွေခွန် နှုန်းထားအသစ်နဲ့ ဝင်ငွေခွန် ဆောင်ရတော့မယ်ဆိုရင် …
သင် ဘယ်လောက် ဆောင်ရမလဲ သိပါသလား?
သင့်အကြောင်းကို အဝါကွက်မှာ ဖြည့်ပါ။ အဖြေကို အပြာကွက် မှာ ကြည့်ပါ။
Excel နဲ့ တွက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်ကို http://luzein.minus.com/mKR6Y2VXR/3 မှာ ဒေါင်းလုပ်ချယူပါ။ ဖိုင်ဖွင့်ဘို့ password က luzein ဖြစ်ပါတယ် :)
revision 2012.5.15: wrong Larger Rates were fixed. *What were wrong? see above image.
credit to: sis Nayoowaytun and bro Kyawnaingtoe
for their kind effort on proof-reading.
I hope this version 2012-5-15 should be error free now. :)
revision 2012.5.16: Insert Table view for line by line input as below.
revised version 2012.5.17 showing tax rate (virtually, the ration between Income and Tax) to the table. Please see as below.
Posted by Ko Gyii at 12:42 PM No comments :
Word Quiz: Microsoft Office Word 2007 / 2010 သုံးတဲ့သူအတွက် ဥာဏ်စမ်းမေးခွန်းပါ။
Word Document ဖိုင်ထဲ (ဝါ) Template ထဲမှာ နေ့စွဲတစ်ခု ထည့်ထားချင်တယ်။ ထည့်ချင်တဲ့ Date Format က ရက် လ နှစ် (နေ့) နဲ့ပါ။
ဥပမာ။ 1-5-2012 (Tue) ပေါ့။ နေ့စွဲပြောင်းတာနဲ့ နေ့ပါ လိုက်ပြောင်းရမယ်။ နေ့ သက်သက်ကို manually မထည့်ချင်ဘူး။
အဲ့နေ့စွဲဟာ Today တော့ မဖြစ်ရဘူး။
Excel နဲ့လည်း မဖြေရဘူး။ :)
scenario: နှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိသော ကျောင်းသားအားကစားပွဲတော်အတွက် နေ့စွဲများနှင့် events များ စုစည်းထားသည့် word ဖိုင် တစ်ခု ရှိသည် ဆိုပါစို့။ တာဝန်ကျ ကျောင်းဆရာသည် နှစ်စဉ် ၎င်းဖိုင်ကို ပွားယူ၍ ရက်ချိန်းခြင်း၊ event များ ပြင်ဆင်ခြင်း စသည့် routine work ကိ်ု လုပ်ရသည်။ event များကို ရက်အလိုက် စီ၍ ဖော်ပြထားရာ ရက်၊ နေ့ နှင့် event ကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရသည်မှာ အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ရက်နှင့် နေ့ မှာ ဆက်စပ်နေသောကြောင့် ရက်သတ်သတ် နေ့သတ်သတ် manually ဖြည့်သွင်းရသည်မှာ human error များသော အလုပ်ပို တစ်ခုဟု ယူဆသည်။ ၎င်း routine work ကို သူသည် word ဖိုင် အဖြစ်သာ ထားရှိလိုသည်။ Excel ဖိုင် (သို့မဟုတ်) Excel Object ကို လုံးဝ မသုံးချင်ပေ။
10-9-2012 (MON) အားကစားပွဲကျင်းပရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေး (၁)
25-9-2012 (TUE) အတန်းလိုက် အစမ်းလေ့ကျင့်အပြီး
26-9-2012 (WED) ရီဟာဇယ် စုပေါင်းလေ့ကျင့်ပွဲ
27-9-2012 (THU) အားကစားပွဲ ကျင်းပသည့်နေ့
ဒီလို ရက်နဲ့ နေ့ တွေ အများကြီး ရေးရတဲ့ အခါ နေ့နဲ့ ရက်နဲ့ တွဲပြီး ဖော်ပြချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ :)
Word ဖိုင်သက်သက်ဖြင့် ၎င်း routine work တွင် human error ကို လျော့ချရန် သင် ၎င်းအား မည်သို့ အကြံပေးနိုင်မည်နည်း ?
by Number to Myanmar Text on Friday, May 4, 2012 at 10:50am ·
Posted by Ko Gyii at 11:48 AM No comments :
ကိန်း၊ ဂဏန်း၊ သင်္ချာ ဟူသည်................................[by Number to Myanmar Text]
ကိန်း၊ ဂဏန်း၊ သင်္ချာ ဟူသည်...
by Number to Myanmar Text on Wednesday, May 2, 2012 at 10:48am ·
ပုံ ဝိကီမှ ရယူထားပါသည်။
ကိန်း = ပူစ္ဆာ၊ အနက်။ ကိ (ပါဠိလို)။ သင်္ချာဗေဒ ရှေးဟောင်းကျမ်းများတွင် "ကိန်းခန်း" ဟူ၍ ကိန်း နှင့် ခန်းကို တွဲ၍ ခေါ်ဝေါ်ထားရာ ကိန်းမှာ ၁ မှ ၉ အထိ ပေါင်း နှုတ် မြှောက် စား၍ ရသော ဂဏန်းကို "ကိန်း" ဟုခေါ်၍ ထို့သို့ တွက်ချက်၍ မရသော သုညကို "ခန်း" ဟု ခေါ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ သို့သော် မြန်မာ့သင်္ချာသမိုင်းအရ ကိန်းဆယ်လုံး ရှိရာတွင် သုညသည် တစ်၏ အရှေ့မှ ရှိ၍ (၀၊ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈၊ ၉) များကို ကိန်းပြည့်ကိန်းဟု ခေါ်သည်။
* Natural Numbers, Counting Numbers ဟု ခေါ်ကြပါတယ်။ Natural Numbers ထဲမှာ သုံည ပါ မပါကို ငြင်းခုံနေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ဘာတွေပဲ ငြင်းငြင်း မြန်မာတွေ ကိန်း နဲ့ ခန်း ကို ခွဲခေါ်ပုံ၊ သုံညကို "ခန်း" ဟု အမည်ပေးပုံမှာ အလွန် သဘောကျစရာပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးမြန်မာများ
မရှိခြင်း (Null) နှင့်
ကုန်ခန်းခြင်း သုံည၊ ခန်း (Zero) ကို
* ကိန်း ကို အင်္ဂလ်ိပ်လို Numerals ဟု သမုတ်နိုင်ပါသည်။ ကိန်းတို့ကို သညာပြုထားသော သင်္ကေတများကို Numeral Symbol ဟု ခေါ်ပါသည်။ ဥပမာ။ တစ် ကို ဖော်ပြရာတွင် သုံးသော ၁ စသည်။
* Numeral Symbol ကို မြန်မာလို ဘယ်လို ခေါ်သလဲ ရှာတွေ့လျှင် ဖော်ပြပါဦးမယ်။
ဂဏန်း = အရေအတွက် (ပါဠိလို)။ ရှေးက "ကနန်း" ဟု ရေးသားကြသည်။
(အထက်ဇော်ပြပါ ကိန်းတို့ကို အသုံးပြု၍ ရေတွက်ထားသော တန်ဘိုးများကို ဂဏန်းဖြင့် ပြဆိုပါသည်။ ဥပမာ။ ၁၂၀၀၊ ၁၀၊ ၁၅ စသည်။
* ဂဏန်း ကို အင်္ဂလိပ်လို Numbers ဟု ခိုင်းနှိုင်းလျှင် သင့်မည် ထင်ပါတယ်။
သင်္ချာ = သင်္ကေတ အမှတ်သညာ။ သင်္ချာကို သင်္ကေတသဘောဖြင့် ကိန်း၊ ဂဏန်းတို့၏ အမည်သညာဖြင့် အမှတ်အသားပြု၍ တွက်ချက်ရာတွင် သုံးသည်။ သင်္ချာမှာ အမှတ်သညာဖြစ်သည်။ သညာအမှတ်ကို မသိလျှင် ရေတွက်မရသော ကိန်းဂဏန်းသာလျှင် ဖြစ်မည်။ ထိုကြောင့် အသင်္ချေ (1E+140) ဟူသော သညာကို မြန်မာ့ကျမ်းဂန်များ၌ လာရှိသည့်အတိုင်း မြန်မာ့ရိုးရာ တွက်ကိန်းသင်္ချာ၏ ညွှန်းတမ်းအဖြစ် တင်ပြကြပါသည်။
* သင်္ချာကို အင်္ဂလိပ်လို Number System ဟု သမုတ်က သင့်တော်မည် ထင်ပါသည်။ Number System ဟူသည် အောက်ပါ အဓိပ္ပာယ် နှစ်မျိုးရှိကြောင်း "သင်္ချာဝေါဟာရ အဘိဓာန်"တွင် ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်းက ဖွင့်ဆိုခဲ့ပါသည်။
(၁) ကိန်းဂဏန်းများ ပါဝင်သော အစုအဝေး၊ (၂) ဂဏန်းရေးသားနည်းစံနစ် တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်၍ ဖွင့်ဆိုရာတွင် ဂဏန်းရေးသားနည်းစံနစ်ဟူသည် ကိန်းများကို ရေးသားပုံ ရေးသားနည်းကို ဆိုလိုကြောင်း ဥပမာ သုံည ကို "0" တစ်ကို "1"ဟု ရေး၏ဟု ဖော်ပြပါရှိပါသည်။ ၎င်းဖွင့်ဆိုချက်အရ Numeral Symbol (ဝါ) Numerical digit များ နေရာချနည်းသည်လည်း သင်္ချာဟု ခေါ်နိုင်ကြောင်း ပေါ်လွင်ပါသည်။
(ဆရာကြီး ဒဂုန်နတ်ရှင်ရေးသော မြန်မာ့ရိုးရာ ကိန်းဂဏန်းသင်္ချာ စာအုပ်မှ ကောက်နှုတ်တင်ပြပါသည်။)
ဆွေးနွေးရန်ရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကွန်းမန့် ပေးကြပါရန်...။ Thank you...
credit to source: Number to Myanmar Text
Posted by Ko Gyii at 11:50 AM No comments :
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဝင်ငွေခွန် နှုန်းထားအသစ်နဲ့ ဝင်ငွေခွန် ...
Word Quiz: Microsoft Office Word 2007 / 2010 သုံးတ...
ကိန်း၊ ဂဏန်း၊ သင်္ချာ ဟူသည်............................